Nagu saabsan - Rizhao Feiqing International Trading Co., Ltd.
Boorsooyinka ciidda adag
Bacda ciidda culus
gacanta ku hay jawaan ciid ah
Bacda dixiriga ah
Rizhao Feiqing International Trade Co., Ltd. waxay ku hawlan tahay soo saarista iyo iibinta alaabada isboortiga iyo qalabka jir dhiska, soo dejinta iyo dhoofinta ganacsiga
Rizhao Feiqing International Trade Co., Ltd. waxay ku taal Rizhao, garabka dabada ee Shandong Peninsula iyo caasimada isboortiga biyaha. Toddobadii sano ee la soo dhaafay, waxaan had iyo jeer siinay macaamiisheenna alaabooyin wanaagsan, taageero farsamo iyo adeegga iibka kadib.
Shirkadeena inta badan waxay ka shaqeysaa qalabka jimicsiga, badeecadaha isboortiga, alaabada caaga ah, alaabada birta ka sameysan, qalabka korontada iyo qalabka korontada, wax soo saarka alwaaxda iyo dharka irbadaha Iibinta dharka, kabaha iyo koofiyadaha, qalabka xafiisyada iyo alaabada kombiyuutarka lagu isticmaalo; soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha caadiga ah (marka laga reebo kuwa ay mamnuucayaan sharciyada iyo qawaaniinta, iyo kuwa ay xadidayaan sharciyada iyo qawaaniinta waxaa lagu shaqeyn karaa oo keliya shati) (mashaariicdaas u baahan in lagu ansixiyo sida uu qabo sharciga, waxaan kaliya sameyn karnaa howlaha ganacsiga iyada oo la ansaxinayo waaxaha ay khuseyso).
Waxaan haynaa badeecad wanaagsan iyo iibin xirfadeed iyo koox farsamo. Waqtigan xaadirka ah, kooxda waxaa jooga 20 qof. Shirkadeena waxay ka tirsan tahay warshadaha shirkadda qalabka ee Rizhao health Body, haddii aad xiiseyneyso wax soo saarka iyo adeegyada shirkadeena, filo fariintaada internetka ama wac la tashiga
Cinwaanka:704 dhismaha jinwan, huanghai 3road, donggang, magaalada rizhao, shandong